Dhibaatooyinka Xaqa gujinaya ee Windows Explorer ama Windows Desktop ma tusaan “New” entry in menu macnaha guud. Abuuritaanka item ah New ka Home tab ee toolbar ah, ee Windows Explorer uma shaqeeyo. Isticmaalka toobiye keyboard ah Ctrl + Shift + n, waa ka abuuray folder cusub, laakiin aad PC ma aha…
How to fix & reinstate missing Security, Wadaagista iyo Habee ILAALI in Folder Guryaha ee Windows 10
Si aad u soo celiso dhammaan ama wax ka mid ah tabs u baahan sixiddiisa diiwaanka. All itusi lagu samayn karaa meel ka mid ah diiwaanka. Si aad u furato diiwaanka: Win Key + R regedit -> OK The registry should be open. Make sure the address bar is showing… View -> Address Bar Paste…